I-Norregård cozy suit- ukuphila okuyingqayizivele ngasogwini - I-Airbnb
I-Norregård cozy suit- ukuphila okuyingqayizivele ngasogwini
Silwela ukuhlanganisa umbono oyingqayizivele wendlu yekhulu le-19 nesitayela sesimanje esinawo wonke amasevisi ongawadinga ukuze uhlale kamnandi. Ikamelo elithokomele elingu-80 sqm linekhishi elinakho konke, izindawo zokudlela ezingu-2 kanye negumbi lokuphumula elihlangene namakamelo okulala amabili anombhede omkhulu nemibhede emine elala umuntu oyedwa. Ifulethi linefenisha yesimanje enezihlalo ezingu-3 ezinethezekile, izikhwama ezingu-3 zobhontshisi kanye namatafula okudlela angu-2 abantu abangu-4 no-6. Unethelevishini engu-2 exhunywe ku-Apple TV ukuze ubuke iziteshi zakho ozithandayo nokubhaliselwe kubahlinzeki bebhayisikobho nabahlinzeki abakhulu (ungakhohlwa igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi). Igumbi lokugezela elingu-10 sqm ligqamile futhi lineshawa emnandi, usinki nekhabethe kanye nomshini wokuwasha nomshini wokomisa. Unombono wegceke nezingxenye zengadi. Kwezinye izindawo esitezi sesibili kukhona ukuphakama okulinganiselwe kokuma ngenxa yophahla oluchithayo. Kusuka ku- "Norregård Cosy suite" uyakwazi ukungena egcekeni lethu langasese, elihlanganyelwa nezinye izivakashi zethu, lapho ujabulela isikhathi sokuphumula ekuseni, ntambama noma kusihlwa. Kungani ungalungiseleli ingxenye yesidlo sakusihlwa endaweni yokosa ozoyithola epulazini. Ehlobo ungajabulela ikhofi lasekuseni ethala lethu. Ebusika unesibhakabhaka sonke esinezinkanyezi zokubukela. Siyakwamukela e-Norregård ngokuhlala sithemba ukuthi uzokhumbula ngenjabulo futhi unesifiso sokubuyela e- lapho uhamba. Sithemba ukuthi uyayithanda indlu njengathi! Unganqikazi ukubuza uma unemibuzo mayelana namakamelo ethu, indawo yethu noma indlu yethu!
Umndeni wonke uthanda i-Olofsbo. Ebhishi elide elinesihlabathi esinezindunduma ezizungezile umuntu angathanda ukuchitha amaviki amahle ehlobo. Yidla u-ayisikhilimu ngamanani amakhulu, izinkalankala zezinhlanzi, udlale igalofu elincane noma uncike emuva esihlalweni selanga. Qwala izindawo ezizungeze amadolobha amakhulu, i-windsurf, i-kitesurf, udlale igalofu, ugwedle ngaphandle noma ujabulele ezinye zezindawo zokudlela nezinkantini zase-Olofsbo. Kungani ungavakasheli indawo yokudlela yenhlanzi edumile e-Glommen efanelwe ukuvakashelwa. Uma uthanda ukuzijabulisa okuthe xaxa kusihlwa e-Falkenberg noma ehlobo i-Skrea Strand - konke ukukhetha okuningi, futhi sikhona ukukunikeza ulwazi oluthe xaxa uma ucela nje.
Sitholakalela izivakashi zethu nge-imeyili, i-SMS kanye nefoni futhi sizotholakala ngokomzimba ngokwengxenye